Ny Minisitry ny fizahantany any Jamaika dia manao fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i St. Ann Hotelier
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny Minisitry ny fizahantany any Jamaika dia manao fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i St. Ann Hotelier
Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Tourism • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanolotra fiaraha-miory amin'ny havana aman-tsakaizan'ny hotely St. Ann, Richard Salm, izay maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana iray omaly, teny amin'ny làlambe Lland Recovery, St. Ann.
Salm dia tompon'ny Club Caribbean Hotel any Runaway Bay, ary talen'ny fitantanana ny Drax Hall Estate, any St. Ann ihany koa.
Tamin'ny taona 1994 izy sy ny vadiny dia nanangana ny Glen Preparatory School ao an-tokontany ao Salem, izay manohana ny zanaky ny mpiasa ao amin'ny hotely misy azy.
Nekena izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana nasionaly tamin'ny taona 2019 nandritra ny lanonana fankalazana nasionaly sy mari-pankasitrahana tao amin'ny King's House.
“Nalahelo mafy aho nahafantatra ny nahafatesan'i Andriamatoa Richard Salm. Mbola mankasitraka hatrany izahay tamin'ny fanapahan-keviny hametraka an'i Jamaika ho fonenany ary ny tena zava-dehibe dia ny nanokananany ny ankamaroan'ny fiainany hanompoana ny mponina ao Jamaika amin'ny alàlan'ny fizahan-tany sy ny fampandrosoana ny fiaraha-monina. Lehilahy matanjaka tokoa izy teo amin'ny sehatry ny indostria ary olombelona miavaka, "hoy i Bartlett.
“Amin'ny anaran'ny Governemanta sy ny olon'i Jamaika, ao anatin'izany izahay rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, tiako ny hampiseho ny fangoraham-po sy ny fanohananay amin'ny fianakavian'i Andriamatoa Salm. Enga anie ny Tompo hanome anao fampiononana mandritra izao fotoam-pahoriana izao ary enga anie ka handry fahizay ny fanahiny, ”hoy ihany izy.
Salm dia tompon'ny Club Caribbean Hotel any Runaway Bay, ary talen'ny fitantanana ny Drax Hall Estate, any St. Ann ihany koa. Izy koa no nitarika ny fampandrosoana ny Ironshore tao Montego Bay, izay manana golf 18-hole.
Tamin'ny taona 1994 izy sy ny vadiny dia nanangana ny Glen Preparatory School ao an-tokotanin-dry zareo ao Salem, izay manohana ny zanaky ny mpiasa ao aminy trano fandraisam-bahiny. Nitarina ilay sekoly ary ao Discovery Bay, St. Ann no misy azy izao.
Nekena izy noho ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana nasionaly tamin'ny taona 2019 tao amin'ny lanonana nasionaly fanomezam-boninahitra sy mari-pankasitrahana tao amin'ny King's House, izay nanolorana azy ny Order of Distinction in the Rank of Commander (CD) ho an'ny serivisy ho an'ny fizahantany, fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina ary ny fampandrosoana ny fiarahamonina .